Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Jasiiradda Canary ee La Palma hadda waa aag masiibo
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ku dhawaaqida aagga musiibada ayaa u oggolaan doonta dowladda Spain inay malaayiin euro oo maaliyad dowladeed ah diyaar u ahaato si loo taageero tallaabooyinka deg -degga ah ee La Palma, iyo dadka deggan jasiiradda ee ay saameysay dhaqdhaqaaqyada folkaanaha ee daran ayaa sii wada inay burburiyaan jasiiradda.
Jasiiradda La Palma ee Isbaanishka Canary ee Isbaanishku waxay ka sugaysaa daruur sumeysan oo ka imanaysa lafaha fulkaanaha.
Dowladda Isbaanishka ayaa malaayiin taageero u ballanqaadeysa iyada oo hawsha folkaanaha ee aadka u daran ay sii waddo burburinta La Palma.
Hadda, malaayiin ku jira kheyraadka gobolka ayaa la sii deyn karaa si ay u taageeraan tallaabooyinka degdegga ah ee La Palma, iyo kuwa ay saameysay qarxinta.
Dowladda Spain ayaa soo saartay bayaan maanta, si rasmi ah ugu dhawaaqday Canary Islands'La Palma, oo fadhida xeebta Waqooyiga Afrika,' aag musiibo '.
Ku dhawaaqida aagga musiibada ayaa oggolaan doonta Dowladda Spain si malaayiin euro oo maaliyad dawladeed ah loo heli karo si loogu taageero tallaabooyinka deg -degga ah ee La Palma, iyo dadka deggan jasiiradda ee ay saameeyeen dhaqdhaqaaqyada folkaanaha ee darani waxay sii wadaan inay burburiyaan jasiiradda.
Sida laga soo xigtay Dowladda Spain Afhayeenka, dowladda ayaa u qoondeysay xirmo horudhac ah € 10.5 milyan ($ 12.30 milyan) oo ah kaalmo lacageed oo loogu talagalay La Palma.
Xirmada waxaa ku jira million 5 milyan si loogu iibsado guryo, halka inta soo hartayna loo qoondeyn doono iibsashada alaabta guriga iyo alaabta guriga ee muhiimka ah kadib markii kumanaan la raray.
Lava ayaa ka sii qulquleysa foolkaanada Cumbre Vieja oo markii hore dillaacyada la furay 19 -kii Sebtember kadib tobannaan sano oo aan dhaqdhaqaaq lahayn, oo burburisay ku dhawaad ​​600 oo guri iyo sidoo kale kaniisado iyo beero moos ah Jasiiradda Canary caan ku ah dalxiisayaasha.